Aung.Info | အမှာစာများ
၈၈ တုန်းက အမှတ်တယ စာများရေးရန် စိတ်ကူးမိပါတယ်…
အဲဒီတုန်းက အတွင်းစကား ကြားရတာတွေဟာ ကောလဟာလ လား၊ အမှန်လားတော့ မသိပါဖူး။ ကျနော်တို့ အဖေတွေ အိမ်မှာ ပြောတဲ့ စကားတွေကို ကျနော်တို့ ခိုးနားထောင်ပြီး၊ သူငယ်ချင်းတွေ စုံတဲ့ အခါ ပြောဖြစ်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ကောလဟာလ တွေကို ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် အင်မတန်ကို တိုက်ဆိုင်နေလွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၈၈)က ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ကောလဟာလများ လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး ဆောင်းပါး တပုဒ် အခန်းဆက်နဲ့ ရေးသွားမယ် စိတ်ကူးကြည့်ပါတယ်။
Posted on 23/Nov/2016 23/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 952 views	with 78 comments	.
Facebook Page ကို ကန့်သတ်ထားပါသည်
ယခင်က Aung Blog Facebook Page ကို Like လုပ်ထားပြီး၊ ဝင်ကြည့်နေသော်လည်း အခုအခါ ဝင်ရောက်ကြည့်လို့ မရတော့သည်မှာ – အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်ဖို့ ကန့်သတ်ထားလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာများကိုလဲ အသက် မပြည့်သေးသူများ ကြည့်ရှုရန် သင့်တော်မည် မဟုတ်ပါ၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ကန့်သတ်ချက်များကိုလဲ သီးသန့် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Posted on 19/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 147 views	with no comments	.
မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း
အခြား အင်တာနက် အချိတ်အဆက်မှ ဆက်သွယ်ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်များမှ အပ၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင် ဖော်ပြသည့် ရုပ်ပုံ၊ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တို့သည် ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ မူပိုင်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် မူရင်း အချိတ်အဆက်ကို ဝေဌဖော်ပြခြင်းမှ အပ၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ် စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ တရားဝင် စာဖြင့်ရေးသားပြီး ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ၊ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ပါသည်။
Posted on 18/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 140 views	with no comments	.
ဤဝက်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူများ၏ အချက်အလက်များကို ရယူ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒ
ဤဝက်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူများ၏ အချက်အလက်များကို ရယူ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒမှာ Privacy ခေါ် ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံကို ရှင်းလင်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted on 18/Nov/2016 18/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 146 views	with no comments	.
ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရေးသား တင်ပြသည့် အကြောင်းအရာများသည် ဖြေဖျော်ရန် သက်သက်သာ ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ရှိသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသာ ဖတ်ရှုရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ အကြောင်းအရာတို့သည် စာရေးသူ၏ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်၊ တိုက်တွန်းချက်၊ လှုံ့ဆော်ချက်၊ နှင့် ဖြေဖျော်ရန်မှအပ အခြား ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခု ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်း မပြုရပါ။
Posted on 16/Nov/2016 19/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 182 views	with no comments	.
အင်တာနက် ဖိုင်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ၏ ဖိုင်များ ထားသိုနေရာ (hosting) မှာ ယခင်က အမေရိကား ရှိ အင်တာနက် ဖိုင်များ ထားသိုသည့် လုပ်ငန်းနေရာ (web hosting server) မှ ယခု စင်္ကာပူ သို့ ပြောင်း ရွှေ့ တင်ထားလိုက်ပါသည်။
Posted on 13/Oct/2016 Categories အမှာစာများTags အသိပေးကြေညာစာ
This post has 159 views	with no comments	.
ဤဝထ္ထုမှာ အချို့စာဖတ်သူများ အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဖတ်ရှုရန် မသင့်သော ဝထ္ထု ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည့် အကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted on 15/Sep/2016 12/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags ထိုင်းကချေသည်
This post has 737 views	with 49 comments	.
ဆိုဒ်ကို အသစ်ပြင်ဆင် စာပြန်ရေးခြင်း
ဤ ဘလော့ဂ် မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကပင် စတင် ရေးသားလာခဲ့သော်လည်း၊ ကြားတွင် နေ့စဉ် စာရေးသားရန် နှင့် ဆိုဒ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် အချိန် အခက်အခဲကြောင့် ၃ နှစ်ကျော်လောက် ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ရပ်နားစဉ် ကာလများတွင် Facebook ပေါ်မှာ စာတို စာစများ ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ သော်လည်း၊ ထိုမှ တဆင့် စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အား တင်ပြရသည်မှာ အားပါး တရ သိပ်မရှိလှပါ။
Posted on 09/Sep/2016 16/Nov/2016 Categories အမှာစာများTags နှုတ်ခွန်းဆက်
This post has 274 views	with no comments	.